Ukuphupha ubuthathaka Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Ukungabi namandla kuhlala kusaziwa ngokubambisana "njengobuthathaka bomntu." Nangona kunjalo, eli gama lifihla imeko enzulu eyaziwayo, eyile 'ukungasebenzi kakuhle'.
Kwiminyaka embalwa edlulileyo yayiziingxaki zengqondo ezazibekek 'ityala ngesi sifo, kodwa namhlanje kuyaziwa ukuba kwiimeko ezininzi kunezizathu eziphilayo okanye luphawu lwezifo zomzimba ezinjengesifo sentliziyo. Nangona kunjalo, amaxesha ngamaxesha omabini, ngokwengqondo nangokwasemzimbeni, adlala indima ebalulekileyo ngokudibeneyo.
Ngapha koko, unxibelelwano lunokwenziwa phakathi komsebenzi obuthathaka we-erectile kunye nobudala bomntu ochaphazelekayo. Kuba kwiimeko ezininzi obu buthathaka benzeka emadodeni amadala aphakathi kweminyaka engamashumi amathandathu ukuya kumashumi asixhenxe, yiyo loo nto ukungabi namandla kusoloko kubonwa njengophawu lokuguga.
Kodwa kunokuthetha ntoni xa umntu ephupha ngokungabi namandla? Ngaba mhlawumbi kungunobangela wokwenyani wale nto, okanye luloyiko lomntu kwesi sifo? Kuthekani ukuba ungumfazi kwaye uphupha ngale nto?
1 Uphawu lwephupha «ukungabi namandla» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ukungabi namandla» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ukungabi namandla» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ukungabi namandla» - ukutolikwa ngokubanzi
Uphawu lwephupha "ukungabi namandla" lunokubhekisa kukugula okuqhubekayo kuhlalutyo lokulala ngokubanzi. umthwalo yalatha kubomi bomphuphi. Ekuvukeni kobomi, uhlala engaziva ekwazi ukumelana nayo, enefuthe elibi kuye.
Ukuba umphuphi une-erectile dysfunction ngexesha lokwabelana ngesondo okanye ngexesha lokwabelana ngesondo ephupheni, kwaye ke mhlawumbi nokuba neentloni, oku kunokubonisa, kwelinye icala, ubunzima bokwenyani kwindawo yesini.
Kwelinye icala, ngasemva kwale meko yamaphupha kunokubakho uphawu lwe ukuswela ukuzithemba fihla. Ukuba ukungasebenzi kakuhle kwe-erectile kwenzeka ngokunxulumene nesimboli yamaphupha "isini esidala", oku kungalumkisa ngezisongelo zabanye abantu.
Ukuba ukungafezekisi ulwakhiwo kwenzeka kwindoda ephupheni, oku kunokuba ngenxa yomelele uxinzelelo lwangaphakathi Iingoma. Umphuphi kufuneka azinakekele ngaphakathi kwaye azame ukufumana imeko yokulingana kunye nokuvisisana kwakhona. Uloyiko lokuphulukana namandla anokubonisa ixesha lokuphumla okanye uxinzelelo olufana nephupha.
Ukuba iphupha lifuna ugqirha ngelixa ulele ngenxa yokukhubazeka, kufuneka kuboniswe ngokubanzi ukuba ufuna inkxaso kunye noncedo lwabanye abantu kwimeko ethile ekuhlala kakhulu. Kubomi bokuvuka, akufuneki woyike ukucela uncedo.
Uphawu lwephupha «ukungabi namandla» - ukutolikwa kwengqondo
Ukutolikwa kwengqondo kwamaphupha kubeka uphawu lwephupha "ukungabi namandla" ikakhulu njengophawu lwakho. ukuphoxeka kubudlelwane. Oku kunokuba kunxulumene nomgangatho wesondo, kodwa ezinye izizathu zisenokuba zikhokelele kukwahlukana. Kwakhona, kwezinye iimeko iphupha lokungachumi linokubonisa iingxaki zokwenyani kule ndawo.
Ukuba umntu akanamandla kwaye akanakho ukufezekisa ulwakhiwo ephupheni, oku kunokukhula kancinci. Ukuzithemba uphawu. Ukuphupha kuhlala usoyika ukusilela okanye ubuthathaka kwinyani. Ukuba kwelinye icala iqabane lakho alinamandla xa ulele, uhlala ujongene neengxaki zeemvakalelo ebezicinezelwe ngaphambili.
Ukuba ukungabinamandla ephupheni kunokulandelwa emva kwi-castration, emva koko ngaphakathi el mundo ukuvuka kuhlala kunempikiswano enokwenzeka Ukuzisola kufanelekile. Ukoluka okanye ukuthena, okukhokelela kukungachumi, kunokubonisa iminqweno okanye iminqweno ecinezelweyo.
Ukuba ukutshaya kungunobangela wokungabi namandla ngexesha lokulala, kungacetyiswa ukuba lowo uleleyo aziqhelanise nenyani yakhe. Ukufuna Ukongeza ekukhonzeni iimfuno zakho ezinzulu. Kuba kuya kufuneka uyazi ngoku. Ukuba umntu akanakuphila kunye ngenxa yokusela kakhulu ephupheni, umntu ekuthethwa ngaye uhlala esoyika ukungabikho kwamandla okanye amandla ngokwenyani.
Uphawu lwephupha «ukungabi namandla» - ukutolika kokomoya
Ukubonwa ngokwembono yokomoya, umfanekiso wephupha "ukungabi namandla" inokuba yeyokwenyani. Yintlungu lomntu uphuphayo ngaphambi kokuphulukana namandla akhe okanye amandla ezesondo.